Translate automatically in Burmese with examples
Results for automatically translation from English to Burmese
automatically selected: %s
အလိုအလျှောက်ရွေးချယ်ခဲ့သည် - %s
automatically detected encodings
အက္ခရာဆိုင်ရာ ဖော်ပြခြင်းနည်းစနစ်ကို အလိုအလျောက် သိရှိခြင်း
automatically selected %s: %s
%s ကိုအလိုအလျှောက်ရွေးချယ်ခဲ့သည် - %s
automatically reload the document
discover the stun server automatically
stun ဆာဗာကို အလိုအလျောက် လိုက်ရှာပါ
automatically spell-check the current document
လက်ရှိ စာရွက်စာတမ်းအား အလိုအလျောက် စာလုံးပေါင်းစစ်
စက်စစချင်း သင့်အကောင့်များကို အမ်ပသီမှ အလိုအလျောက် ဝင်ရောက်သင့်မသင့်
အသုံးပြုခြင်း မရှိတော့လျှင် အဝေးရောက် အခြေအနေသို့ အမ်ပသီမှ အလိုအလျောက် ပြောင်းပေးသင့်မသင့်
whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/reconnect.
ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာ မန်နေဂျာမှ အလိုအလျောက် အဆက်ဖြတ်/ ပြန်ဆက် ရန် လိုမလို
when enabled, the image window will automatically resize itself whenever the physical image size changes.
ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပုံ အရွယ် ပြောင်းလဲတဲ့ အခါတိုင်း ရုပ်ပုံ ၀င်းဒိုးဟာ အလိုအလျှောက် ၄င်းကိုယ်တိုင် အ​ရွယ် ပြန်ညှိလိမ့်မယ်။
when enabled, the image window will automatically resize itself when zooming into and out of images.
ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ၊ ရုပ်ပုံများကို ချဲ့ကားပြီး၊ ကျုံ့တဲ့အခါ ရုပ်ပုံ ၀င်းဒိုးဟာ အလိုအလျှောက် ၄င်းကိုယ်တိုင် အ​ရွယ် ပြန်ညှိလိမ့်မယ်။
the thumbnail in the open dialog will be automatically updated if the file being previewed is smaller than the size set here.
အစမ်းကြည့်ရှုနေတဲ့ ဖိုင်ဟာ အခု ချမှတ်ထားတာထက် ပိုငယ်ရင် ဖွင့်ထားတဲ့ အညွှန်းစာမျက်နှာထဲက လက်သည်းပုံဟာ ​အလိုအလျှောက် မွမ်းမံနေလိမ့်မယ်။
empathy can automatically discover and chat with the people connected on the same network as you. if you want to use this feature, please check that the details below are correct.
တူညီကွန်ယက်တွင်းမှ ချိတ်ထားသူများနှင့် စကားပြောဆိုနိုင်ရန် အမ်ပသီက အလိုအလျောက် ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ဤအပိုင်းကို ခွင့်ပြုစေလိုလျှင် အောက်ပါအချက်များ မှန်မမှန် စစ်ဆေးပါ။ သို့မဟုတ် ပိတ်စေလိုလျှင် အကောင့်ဒိုင်ယာလော့မှ သွားပိတ်ပါ။
generated by4visitors book (Italian>English)kaam shuru ho gaya (Hindi>English)perintah pembahagian harta (Malay>English)advertisements (English>Afrikaans)salama kabisa (Swahili>English)time and tide wait for none (English>Gujarati)kya ap mera dost bano ga (Hindi>English)happy wednesday (English>French)chiusura delle tubazioni (Italian>English)te matoasentones (Spanish>English)how to be you po (English>Tagalog)kali zuban (English>Hindi)don't give up (English>Malay)bon lundiatoi (French>English)सेक्सी पिचर video open (English>Hindi)सेक्स वीडियो ओपन (Hindi>English)मारवाड़ी सेक्सीzxxz (Afrikaans>English)makakasira (Tagalog>English)decepció (Catalan>Spanish)penghantaran barang (Malay>English)kayat ko met ilocano to tagalog dictionary (English>Tagalog)please slide to verify (English>French)हिंदी सेक्सी video videobf (Hindi>English)